टेक रिभ्यु Archives - Page5of 12 - Living with ICT
Home / टेक रिभ्यु (page 5)
जियोनि एम फाईभ प्लस (Gionee M5 Plus)
नेपाली मोबाइल बजारमा आधिकारिक बिक्रेता टेलिटकले जियोनिको म्याराथन एम फाईभ प्लस ल्याएको छ । यो फोन जियोनिको ठुलो क्षमताको ब्याट्री रहने म्याराथन सिरिजको नयाा संस्करण रहको कम्पनीले जनाएको छ । एम फाईभ प्लसमा पूर्ण मेटालिक र अल्ट्रा स्लिम युनिबडिमा ६ इन्चको फुल एचडी अमोलेड स्क्रिन रहेको छ । स्क्रिन अलि ठुलो भएपनि आकर्षक डिजाइनले मोवाइल राम्रो देखिन्छ । ३ जिबी …
एजुकेशन सर्च पोर्टल – EducationHubNepal
हिजो आज शैक्षिक क्षेत्र व्यापक हुदै गईरहेको छ । यसको क्षेत्रको व्यापकता संगै विद्यार्थीका माझ कुन कलेज पढ्ने र कस्तो विषय छान्ने भन्ने बारे जटिलता थपिएको छ । तसर्थ विद्यार्थीहरुमा कुन ठााउ उपयुक्त हो ? र कुन स्कीम आफ्नो लागि सहि हुन सक्छ ?, उक्त पाठ्यक्रममा केकस्ता विषयवस्तु छन् र त्यसका लागि कसलाई बुझ्ने भन्ने प्रश्न बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु हुन् …
६ जिबी ऱ्याम भएको वान प्लस ३ नेपाली बजारमा, आधा घण्टा चार्ज गरेर दिनभर चलाउन सकिने
Jul 26, 2016	1
वान प्लसको बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन वान प्लस ३ नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार बबरमहलस्थित वोलिज स्टोरमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसको सार्वजनिक भएको हो । चिनियाँ प्रख्यात मोबाइल ब्राण्ड वान प्लसले यो स्मार्टफोनलाई विश्वका ७ मुलुकबाट एकैचोटी बिक्री सुरु गरेको छ । मूल्य र फिचरको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डमा पर्न सफल वान प्लसले वान प्लस ३ लाई फ्ल्यागसिप स्मार्टफोनको रुपमा …
‘वान प्लस ३’ स्मार्टफोन सार्वजनिक हुदै, ६ जीबीको र्याम सहितका आकर्षक बिशेषता !
एउटा स्मार्टफोन सेट सार्वजनिक गरेरै विश्वबजारमा चर्चा कमाउन सफल चाइनिज स्टार्टअप कम्पनी हो वान प्लस । वान प्लस वान, वान प्लस टु र वान प्लस एक्स स्मार्टफोनको चर्चा राम्रै भयो । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि वान प्लस एक्स राम्रै बिक्री भयो । यहि दमदार स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिरहेको कम्पनी वान प्लसले वान प्लस थ्री जुलाई २७ मा नेपालमा सार्वजनिक गरिरहेको छ । …
हुवावेको बहु प्रतिक्षित स्मार्टफोन पि ९ सार्वजनिक हुदै, के छ पि ९ मा ?
विश्वबजारमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको हुवावेले हाफ्नो पछिल्लो बहु प्रतिक्षित स्मार्टफोन पि ९ आज नेपालमा सार्वजनिक गर्दैछ । आज बेलुकि ३ बजे सिटी सेन्टर कमलपोखरीमा सार्वजनिक हुने पि ९ फोटोग्राफीको लागि विशेष आकर्षक स्मार्टफोन रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । हुवावेले पहिलोपटक क्यामेराको लागि लेइकासग सहकार्य गरि उत्कृष्ट फोटोग्राफीको विशेषताहरु समावेश गरिएको कम्पनीले बताएको छ । यसमा आरजिबी सेन्सर सहितको …
नेपाली बजारमा नया ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु भित्रने क्रम अझ बढेर गएको छ । आइटीका अन्य बिजनेशमा काम गरिरहेका र नया कम्पनीहरु पनि मोवाइल बजारमा आकर्षित भइरहेका छन । यस्तै बिराटनगरको कम्युटर हार्डवेयरको क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिती जनाएको कम्प्युटर प्लानेटको सिस्टर कम्पनी मोवाइल प्लानेटलले अर्को चर्चित चिनिया स्मार्टफोन सेरिज नेपाली बजारमा भित्राएको छ । युमिका ३ वटा नया मोडलहरु अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध …
डिजिटल क्रिएशन बिक्री गर्न ‘जोकिमो डट कम’
Jul 16, 2016	0
www.zokimo.comके तपाई कम्प्युटरमा विभिन्न किसिमका क्रिएशनहरु गरिहनुभएको छ ? त्यस्ता कामहरु बिक्री गरेर आम्दानी गर्न पाए झन कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने अब यसको समाधानको लागि नेपालमै त्यस्तो प्लाटफर्मको विकास भएको छ । जोकिमो डट कमले तपाइको डिजिटल क्रिएशनहरुलाइ अनलाइन मार्फत बिक्री गर्न सहयोग गर्नेछ । क्रिएट, प्रमोट र प्रोफिट स्लोगन सहित सुरु भएको जोकिमोमा तपाइहरुको डिजिटल क्रिएशनलाइ …
पानासोनिक इलुगा मार्क (Eluga Mark)
नेपालमा पानासोनिक मोबाइलको अधिकृत विक्रेता एलाइड ट्रेडलिंकले पानासोनिक ब्रान्डको इलुगा मार्क मोडल नाम दिइएको स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । इलुगा मार्क मिड रेन्जको स्मार्टफोन हो । इलुगा मार्कमा ५.५ इन्चको आइपिएस एलसिडी टचस्क्रिन (७२०ह१२२८) पिक्सेल रिजोलुशन छ । फोनको प्लाष्टिकको ब्याक कभर रहेको छ । स्मार्टफोन एन्ड्रोइड ५.१ अपरेटिङ सिष्टममा चल्छ । क्वाल्कम स्नाप्ड्रागन ६१५ अक्टाकोर प्रोसेसर र २ जिबी …
आकर्षक डिजाइन र पर्फमेन्समा – वन प्लस एक्स (One plus X)
विश्व बजारमा छोटो समयमा नै इनोभेटिभ प्रडक्ट, आकर्षक डिजाइन र मार्केटिङको नया शैलीले लोकप्रिय बनेको वनप्लस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा बिक्रि सुरु भएको छ । आइहब नेपाल प्रा.लिले नेपालमा बिक्री सुरु गरेको यो स्मार्टफोनका ३ वटा मोडलमात्र अहिले उपलब्ध छन । पहिलो चरणमा वान प्लस एक्स अनलाइन अर्डरबाट बिक्री सुरु गरेको कम्पनीले छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ । पााच …
अमेजिङ ब्याट्री ब्याकअप – कलर्स इ १५
कलर्स मोबाइलले इलिट सिरिजमा नयाा शृंखला इ १५ सार्वजनिक गरेको छ । ५ हजार एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री एवम् पावर बैंक प्रणालीसहितको यो मोबाइल नेपाली ब्रान्डको एकमात्र अत्याधिक क्षमताको ब्याट्रीयुक्त मोबाइल भएको कम्पनीको दावी छ । कलर्स एक्सफ्याक्टर इ १५ मा एण्ड्रोइड ललिपप ५.१ अपरेटिङ सिस्टममा सञ्चालन हुन्छ । १२८० x ७२० पिक्सल रिजोलुसनमा ५ इन्चको एचडी आइपीएस स्क्रिन र …